Hab-dhaqan dunida ku cusub oo loo aaneeyay sababta ay usoo noqnoqdaan cudurrada laga qaado XAYAWAANKA | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Hab-dhaqan dunida ku cusub oo loo aaneeyay sababta ay usoo noqnoqdaan cudurrada...
Hab-dhaqan dunida ku cusub oo loo aaneeyay sababta ay usoo noqnoqdaan cudurrada laga qaado XAYAWAANKA
(Hadalsame) 12 Feb 2020 – Dunida ayaa la legdamaysa fayruska coronavirus, kaasoo ay faafistiisu kasoo bilaabatay dalka Shiinaha balse iminka gaarey ilaa 16 dal oo kale, oo uu ku jiro dalka UK.
Faafintaanka cudurro cusub waa caadiyan loo arkaa xaajo “mar soo bax ah”.
Sidee xayawaanku dadka u jirrin karaan?
Xasaraddii cudurka dilaaga ah ee HIV/Aids ee1980-meeyadii wuxuu kasoo bilowday daanyeerrada waawayn, intii u dhaxaysey 2004-07-dii cudurkii hargabkii shimbiraha ee Avian Flu, iyo doofaarrada oo keenay hargabkii doofaarka ee sanaddii 2009-kii. Waxaa ka dambeeyay curudkii halista ahaa ee oof wareenka ahaa ee Sars oo laga qaaday Fiid-meerta, fiid meerta oo sidoo kale sii marsiinaysa bahal saan-gurta lagu sooco oo civets la yiraahdo, waxay sabab u noqdeen cudurka halista ah ee Ebola.
Inta badan xayawaanku waxay sidaan wakiil cudureedyo (pathogens) – waa jeermisyo iyo fayrusyo cudurro sababi kara.
Tadawurka ama isbeddelka uu sameeyo si uu u noolaado waxay ku xiran tahay inuu ku dhoco noole cusub – inuu u gudbo gacalo kalena waa hal qaab oo uu sidaa ku sameeyo.
Hannaanka difaaca ee noolaha uu dulinkan cusubi galay ayaa kaddib difaac gelaya si uu u dilo jeermiska ama fayruska cusub, taasoo ka dhigan inuu halkaa ka bilowdo tadawur abadi ah oo uu midba isku dayayo inuu kan kale ka adkaado.
Waxaa sidoo kale magaalooyinka soo galay oo ku nool xayawaanno cusub – jiirar, doolliyo, raccoon, dabagaalle, dawaco, shimbiro, bahal higlo (dawaca madoow), daanyeerro – waxay ku noolaan karaan jirdiinooyinka iyagoo quudanaya reereebka insaanka.
Mararka qaar, duurjoogtu waxay si wanaagsan ugu noolaan karaan magaalooyinka in ka badan duurka ama kaynta, maadaama ay quud badan magaalooyinka ka heli karaan, taasoo keenta inay magaalooyinku noqdaan goob ay cudurradu ka tafiirmaan.
Jeer ay dalalku qaadayaan tillaabooyin ay cudurkan ku xakamaynayaan, waxaa suurtagal ah inay ka dhalato cawaaqib dhaqaale.
Markasta oo aannu degaanka bedelno, waxaan kharribaynaa hannaanka dhulka (ecosystem), annagoo sidaa fursad ku siinayna inay cudurro cusubi soo baxaan.
Prof Tim Benton waa maareeyaha daraasaadka ee kooxda Emerging Risks ee Chatham House, isagoo hoggaaminaya barnaamijyada Tamarta, Degaanka iyo Khayraadka. Waana urur madax bannaan waxaa se barnaamijkan u xil saaratay BBC News.
Previous articleSomalia oo qalinka ku aastay heshiis aad u ANFICI doona + Sawirro (Waxyaabaha la qabanayo)
Next articleMaraykanka oo dib u furay KAALMADII tooska ahayd ee uu siin jirey Ciidamada Xoogga (Qalab casri ah oo ay helayaan)